Orinasa masinina hafa - Mpanamboatra masinina hafa Sina, mpamatsy
Milina Tube Extruder
Masinina Rod Extruder
Tube / Sodina
Masinina miolakolaka PTFE feno-mandeha
Masinina plastika PTFE plastika fanitsiana
Koa satria ny PTFE dia tsy hikoriana ambonin'ilay teboka mampiempo azy, dia tsy azo asiana tsindrona ary mila teknika fanodinana manokana. PTFE novolavolaina dia voahodina amin'ny alàlan'ny famatrarana voalohany ny famolavolana ny vovoka ho lasa preforms, ary avy eo manova ny preforms amin'ny dingana mitovy amin'ny fanodinana vy voadio. Ity dingana ity dia mamorona endrika geometrika izay afaka milina, mifangaro ary / na mandroso. Famaritana ny vokatra ho an'ny famolavolana mandeha ho azy: ny famolavolana mandeha ho azy, endrika miorina amin'ny famolavolana compression, dia ny ...
Masinina PTFE Hydraulika fanontana milina
1. Ny toetra mampiavaka ny milina fametahana milina PTFE dia mizara ho milina famolavolana tanana, semi-automatique ary automatique tanteraka. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana tsy tapaka ny teknolojia fanaovan-gazety mamolavola, ny fitaovana dia manan-tsaina kokoa, marin-toerana ary mahomby kokoa. Ny karazana mandeha ho azy manan-tsaina dia fehezin'ny rafitra PLC, hametrahana ny tsindry, ny elanelam-potoana, ny hafainganam-pandeha, ny habetsahana ary ny fotoana iainana, ary ny fandidiana dia tsotra. Miaraka amin'ny famolavolana samihafa, ny fitaovana dia afaka mamaly ny filan'ny mpampiasa isan-karazany, ...
SYH-50 Mixer telo-habe
Fitsipika miasa: Ny barika fampifangaroana dia mihantona amin'ny faran'ny lohan-jiro lehibe sy entina amin'ny alàlan'ny tonon-taolana iraisampirenena Y. Ireo tonon-taolana roa dia mifanelanelana ary mifampitohy amin'ny habakabaka. Rehefa tarihina sy ahodina ny zotram-pamily, dia mihetsika miverimberina eny amin'ny habakabaka ny barika iraky ny kardan, toy ny fandikan-teny, ny fihodinana ary ny horonan-taratasy. Ny fitaovana ao anaty varingarina dia arahin'ndrindra ny hetsika mitambatra telo-refy amin'ny lalana axial, radial ary circumferential. Karazan-pitaovana maro amin'ny t ...
Ilay v-100 PTFE Powder mixer
Masontsivana ara-teknika fitaovana: 1, fampifangaroana barila totalin'ny 100L, fahafaha-mitantana fitaovana: 40-50L 2, Herinaratra môtô lehibe 1.5 kw. 3, Fotoana fampifangaroana Fikirana nomerika 0-99 minitra, fanakatonana ara-potoana. 4, famatsiana herinaratra: 380V / 220V / 50Hz. Fizarana 1: Equipment OverviewEquipment anarana: V-type mixerEquipment maodely ： V-100Equipment isa: iray setEquipment fampiasana: Ho an'ny fangaro amin'ny vovoka Fepetra ilaina: 1, Isaky ny 40-50L fitaovana / fifangaroana batch, ary aza mitondra loto ao anaty ny dingana ny fampifangaroana ...
1. Ampiarahana amin'ny barila enina 10L / 2-3KG mifangaro, ary mihodinkodina miaraka amin'ny revolisiona, revolisiona 30 isa-minitra ary 40 fihodinana isa-minitra. 2. Ny familiana sy ny hafainganana dia azo ahitsy arakaraka ny takian'ny teknika, miaraka amin'ny motera fihenan'ny 1.5kw 2P. 3. Amboary ny jiro fijanonana vonjy maika, apetraho ny mpamaky fotoana. 4. Ampifanaraho amin'ny siny mifangaro plastika 10 miaraka amin'ny fahafaha 10L. 5. 380V 50Hz 3P.